Isitsha sezimbali ukuhlobisa ingaphakathi isikhathi eside. Imikhiqizo uqala ukuvela lapho abantu bafunda indlela ukusingatha nobumba, futhi esikhathini esizayo - kanye nezinye izinto. Ngeshwa, usuku oluqondile ayaziwa, kodwa ezahlukene Decor, imibala kanye izinto ezitsheni uvele China naseGrisi lasendulo. Imikhiqizo endala ukuthi ziye zatholakala lapho bemba Balinganiselwa ku 3rd yeminyaka BC. Zobumba isitsha sezimbali siqala baseChina emakhulwini mayelana 4-6, futhi kusukela ngaleso sikhathi, ukuhlobisa indlu.
umumo isitsha sezimbali
Kusukela ekuqaleni ukukhiqizwa yalezi zinto Ushintshe kakhulu. Imikhiqizo sokuqala kwaqala ngonyaka ngendlela esitsheni side. Ngokuhamba kwesikhathi, baqala ukunyathelisa ehlukahlukene, bobunjwa ngezinye izikhathi okungavamile. Ukuthandwa uthenge izitsha kanye isitsha sezimbali nge maphakathi ezibanzi, tapering kufinyelele entanyeni. Leli fomu likuvumela ukuze kuhlaliswe eliningi liquid iqinisekisa nokuphepha okungcono. Abanye abaculi ukubeka imikhiqizo yabo emlenzeni futhi walenza unamathele. Lokhu kwaba lula ukusetshenziswa izinto Ubukhulu esikhulu. intamo yabo senziwe ngendlela imbali noma leechki. Iphinde isibe umhlobiso eyengeziwe futhi kube lula ukuyisebenzisa.
Abakhiqizi isitsha sezimbali wenza izitsha ezahlukene nezingahlobene. umcabango wabo uyabavumela ukuba adale yobuciko ukuthi abantu bazimisele kakhulu ukuthenga. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, ukukhiqizwa master ivolumu. Lezi isitsha sezimbali kungukuthi zihlukaniswa kwetinhlobo letikhetsekile, kodwa kwadingeka ngentengo ephansi uma kuqhathaniswa imikhiqizo ngabanye production.
Imikhumbi okuqala ezenziwe ngobumba. Ngemva kwalokho balukhulume steel nezinye izinto ezisetshenziswa.
Izinhlobonhlobo zemibhalo lithuthukile amandla imikhiqizo kanye nokubukeka kwabo. Zobumba isitsha sezimbali zintekenteke kakhulu, kodwa ingilazi omnene is avunyelwe ukwenza imithambo yegazi namandla. Ukusetshenziswa plastic nensimbi kwenza isitsha sezimbali nolungenakunyakaziswa nokubanikeza amandla okuba bakwazi ukukhonza isikhathi eside. Liphinde lunikeze ithuba ukubanika ezihlukahlukene amafomu, ngezinye izikhathi vase ka lezi zinto bheka engavamile kakhulu futhi eyinkimbinkimbi.
Imikhumbi zenziwa metal, ngokuvamile camera nge ungqimba igolide noma isiliva, kubanikela ukubukeka engavamile, isesekeli ukhonza njengelungu umhlobiso nganoma yisiphi etafuleni.
Imibala Nezindwangu amaphethini
Imikhiqizo bokuqala kwakungafanele futhi wapenda izithombe, kodwa baqala ukuhlobisa isikhathi. Coloured isitsha sezimbali yazuza eziningi udumo uphoqe abathengi. Masters wazama ukwenza isitsha bhá futhi zizinhle, ukuze babe iyisivunulo iyiphi ekhaya futhi sijabulise iso.
It kwaduma zobumba isitsha sezimbali ngemifanekiso izimbali nezilwane. Abaculi ngesineke kubo omuhle kangaka, eyayibonakala nishaye uma ushaya kamnandi, amacembe ziqala uma ekhankasela.
Master naye wafunda ukunikeza esitsheni imibala kakhulu ezahlukene. Benza ezimhlophe zabo, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, njengegazi, nokunye. Lokhu kwavumela ukuba wenze elikhanyayo kakhulu, futhi ngokuhlanganyela imidwebo, aphendukela ku imisebenzi yangempela yobuciko.
isitsha sezimbali yesimanje
vase-Chinese emhlabeni namuhla iyaqhubeka ithandwa abathengi. Masters zisebenzisa izinto ezahlukene ngoba yokukhiqiza isitsha sezimbali. Empeleni, wonke umkhiqizo wagqoka elihambayo, ngakho intengo iphansi. Nokho, abanye abaculi enze izitsha ngabanye ngezandla.
Manje ungakwazi ukuthenga zobumba isitsha sezimbali yazo zonke bobunjwa nemibala. Izinto ezinjalo kungaba ukuhlobisa hhayi kuphela izindlu, kodwa futhi namahhovisi, amathilomu, izindawo zokudla ngisho ehhotela.
Noma yisiphi isitsha, eyenziwe ngobumba, ingilazi noma ezinye izinto - ngokuvamile wonke omuhle wobuciko. Isitsha sezimbali ungaguqula bese nhle yimuphi elingaphakathi. Ngosizo lwabo kungenzeka ukugxila endaweni ethize egumbini futhi ulethe imibono yabantu.
Indlela Tie indoda isikhafu? A amasu ezilula ezimbalwa
Indlela alole umese kahle
Inyama grinder "Moulinex" - umsizi okuthembekile ekhishini lakho
Iziphanyeko ngokhuni - Imihlobo esisekelo
Izigaba isikhunta umsoco
Uthando: incazelo yamazwi, izinhlobo nezibonelo
Indlela ukuhalalisela intombazane nge Day Valentine enhle?
Izenzakalo zika-1589: kwenzekani nokuthi zithinta kanjani iRussia
Pads for ibele: kuzibuyekezo, izintengo
Izimoto Russian: izimoto, amaloli, injongo ekhethekile. I-Russian umkhakha imoto
Pike ku walker. Ukudoba I-Pike ngoJuni
Amaqanda Scotch: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi izithombe